Wasiirka Qorsheynta oo la kulmay Jaaliyadda | MOPIC
News	Wasiirka Qorsheynta oo la kulmay Jaaliyadda
Wasiirka Qorsheynta oo la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika
Kulankaan oo ahaa mid casho ah ayaa jaaliyada waxaa ay la qaateen Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga caalamiga ah Xukuumada Fadaraalka Soomaliya Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Ceynte waxaana kasoo qeybgalay Waxgarad, aqoonyahanno, ardayda Jamacadaha haweenka iyo qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magalada Cape town ee dalka Koofur Africa.
Kulanka ayaa waxaa uu ahaa mid labada dhinac ay isku dhaafsanayeen xog, isla markaana lagu kala war qaadanayay, ayada oo xubnaha Jaaliyadda ee goobta ka hadlay ay Wasiirka xog ka siiyeen nolosha Soomaalida ku nool dalka Koofur Africa iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan kooxaha burcadda ee dalkaasi ku nool.
Maxamed Raage oo ah aqoon Soomaaliyeed oo wax ku bartay gudaha dalka Koonfur Africa waxaa uu goobta ka sheegay in Soomaalida dhibaatoyinka ay kala siman yihiin dadka kale ee ajaanibta ah ee usoo qaxay dalkaasi.
“Qaarkiin halkaan fadhiya waxaad heystan sharciga dalkan oo halka aad doontaan ku aadan sida dalalka Yurub iyo Mareykanka, dhinaca dilalka iyo dhibaatooyinka waxan kala simanahay dadka kale ee ku nool Koonfur Africa, lakiin Soomaali hadaan nahay saameyn ayey nagu leedahay arrinta”ayuu yiri Maxamed Raage.
Cabdullaahi Cali Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida waxaa uu sheegay in Soomaalida ay fursado badan ku heystaan gudaha dalka koofur afria dhinaca ganacsiga marka laga eego.
“Mar dhaxe waxaa bilaabay dukaamada yaryar in Soomaalida ay ku noqdan shirkado halkaas ayuu ganacsiga kusii balaartay, waxaa la gaaray in Soomaalida ay sameystaan shirkado waa weyn oo wax laga iibsado”ayuu yiri Cabdullaahi.
Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo goobta ka hadlay ugu dambeyntii waxa uu jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koofur Africa ugu baaqay in ay wax la qaybsadaan dadka ay ku nool yihiin.
“Waxaa dalka wax loo tari karaa is leeyahay in meesha la joogo wax laga qabsado, aqoonta oo kale, ganacsiga laga faa’ideysto kadib fursado kale dalka la keeno, xitaa aragtiyo wax lagu dhisi karo ayaa la keeni karaa dalka iyo dadka looga faa’ideyn karaa” ayuu yiri Wasiir Ceynte.
Ugu Dambeyntii qaar ka mid ah xubnaha kala duwan ee kulanka ka qeyb galay ayaa halkaasi Wasiirka ku weydiiyay su’aalo la xariira marxaladda dalka uu marayo, ayada oo Wasiirka uu ugu jawabayay si wanaagsan dhaman su’aalahii la weydiiyay oo ay ku qanceen jaaliyadda waxaana shirka uu kusoo dhamaaday jawi aad u wanaagsan.
June 7, 2015 in News	Newer Post
Inter-ministries coordination meeting organized by MOPIC